ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Kentucky, Louisville မြို့သို့ လာရောက်မည်၊ မြန်မာတို့ ကြိုဆိုရေး ပြင်ဆင်ပြီ (23rd Sept 2012) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Kentucky, Louisville မြို့သို့ လာရောက်မည်၊ မြန်မာတို့ ကြိုဆိုရေး ပြင်ဆင်ပြီ
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ စက်တင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၂
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားကင်တက်ကီဗုဒ္ဓေါဝါဒဆရာတော်နှင့်မြန်မာတိုင်းရင်းသား ညီကိုမောင်နှမများစုပေါင်းကြိုဆိုရေးအစိအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကင်တက်ကီ၊ ထင်နက်စီ၊ အိုဟိူင်းရိုး ပြည်နယ်(၃)ခုကမြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးကလုဝိစ်ဘေးလေဆိပ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားသွားရောက်ကြိုဆိုပါမယ်၊
စက်တင်ဘာလ(၂၃) ရက်နေ. ကင်တက်ကီလုဝိစ်ဘေမြို့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ညအိမ်ဖြစ်ပါတယ်၊ (၂၄ ) ရက်နေ့နံနက် (၉)မှ (၁၀) အထိအမေရိကန်ကင်တက်ကီလွတ်တော်အမတ်မစ်ခ်ျမက်ကော်နယ်စင်တာ၊ လုဝိစ္စဘေးတက္ကသိုလ်မှာဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်၊
စက်တင်ဘာလ( ၂၃ ) ရက်ညပိုင်းသို့မဟုတ် (၂၄ ) ရက်နေ့လယ်ပိုင်းအဆင်ပြေသည့်အချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးနှင့်သီးသန့်တွေ့ဆုံနိုင်ရန်လည်း ဆရာတော်နှင့် လုဝိစ္စဘေးမြို့ကဒကာဒကာမများကစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်၊၊
လူထုခေါင်ဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်အမေရိကန်အစိုးရလုံခြုံရေးအပြည့်နှင့်ခရီးစဉ်အားလုံးကိုသမ္မတအိုဘားမားအစိုးရကစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်မည့်မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံး မိမိတို့ ID အရှိနာမည်များကို ဗုဒ္ဓေါဝါဒကျောင်း ဆရာတော်ထံဖြစ်စေကိုတေဇာအားဖြစ်စေစာရင်းပေးနိုင်ပါတယ်၊ လုံခြုံရေးအရမိမိတို့နာမည်ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားခြင်းမရှိလျင်သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးများကအခမ်းအနားသို. ၀င်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ၊သို့တွက်ကြောင့်စာရင်းပေးသွင်းလာသူများအားဝင်ခွင့်လက်မှတ်များကိုထုတ်ပေးပါမည်၊၊
ဆက်သွယ်ရန် – ဗုဒ္ဓေါဝါဒကျောင်းဆရာတော် အရှင်စန္ဒောဘာသ 270 904 1142 ။ ကိုတေဇာ 502 807 8458